Milicsiga Heerka Aqooneed iyo Hadimada Maamulaha Madaarka Cigaal: Maqaalka Kowaad W/Q Maxamed Beddel | Berberatoday.com
Milicsiga Heerka Aqooneed iyo Hadimada Maamulaha Madaarka Cigaal: Maqaalka Kowaad W/Q Maxamed Beddel
August 25, 2018 - Written by Berbera Today
Iyada oo Somaliland tahay dal dimuqraaddi ah, waxa aan cabbiri doonaa dareenkayga ku aaddan waxqabadka iyo waxyeellada dhallinyaro ay xukuumaddii hore u samaysatay dadka Hargeysa/Sallaxley/Balli-mataan, oo caan ku ah “Jin-dagaagay”. Si gaar ah waxa aan maanta u soo gudbin doonaa faallo ku saabsan Maamulaha Madaarka Cigaal Md Maxamed Yuusuf Ismaaciil.(Dhidar)
Sannadkii 2011ka ayuu noqday hawl-wadeen ka tirsan wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka cirka Somaliland. Sida xeerku dhigayo laguma qaadan imtixaan, aqoon iyo shaqo la xayaysiiyay midnaba. Qof-jeclaysi iyo qaraaba-kiil ayaa lagu doortay. Waxa u ergeeyay adeerkii oo ay muddo dheer golaha wakiillada ku wada jireen Wasiirkii Hore ee Madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi.
Milicsiga Geeddigii Waxbarashada ee maamule (Dhidar)
Isaga oo da’ ahaan nin weyn ah ayaa uu ka yimi deegaanka Uubaale oo ay qoyskoodu reer miyi ahaan u degganaayeen, kaddibna waxa la qoray dugsiga Qudhacdheer. Maadaama oo uu ka weynaa ardayda lodkiisa ah, waa uu sii wadi kari waayay aqoonta dugsiga hoose/dhexe. Waxa loo boodsiiyay dugsiga sare ee Maxamuud Axmed Cali kaas oo uu 2009kii kaga mid noqday waxa loo yaqaanno Indha-caddaynta.
Waxyaabaha lagu xasuusto Maamulaha Madaarka Cigaal Md Maxamed Yuusuf Ismaaciil (Dhidar) waxa ka mid ah:
3. Waxa uu ka mid ahaa adeegayaashii dartood loo beddelay Wasiirradii ka dambeeyay Maxamuud Xaashi sida Cismaan Cabdillaahi Saxardiid (Caddaani) iyo Cumar Maxamed Faarax. Markii ay xilka wasaaradda duulista hayeen wax ka yar afar bilood ayaa mid kastaba laga beddelay kobtaas. Waxaana sabab u ahaa khilaaf soo dhex galay iyaga iyo diraneyaal uu wasaaradda ku beertay Wasiir Maxamuud Xaashi Cabdi.
Maxamuud Biixi Cali Weyrax oo muddo dheer ka tirsanaa Wasaaradda Duulista, gaar ahaanna ka shaqayn jiray madaarka Berbera oo ay xigaal yihiin Maamulaha Madaarka Hargeysa ayaa lagu yidhi “Maxaad xil u doonan weyday?”. Wuxuu yidhi “Shaqooyinka uu Maxamed Yuusuf (Dhidar) qabto ayaanan qaban karin”
La soco in shaa Allah qaybta labaad